ဝက်ခြံအတွက် သဘာဝကုထုံများ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
အသက် ၁၂ နှစ် နဲ. ၂၄ နှစ် အကြား လူငယ် အများစု ကြုံတွေ.နေရတဲ. အလှဖျတ် တဲ. ၀က်ခြံဟာ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း ၊ ရင်ဘတ် ဒါမှမဟုတ် ကျောကုန်းတွေပေါ်မှာ ပေါက်တတ်ပါတယ်။
၁။ အဆီအစိမ်.အစာများ (မြေပဲ၊ ချောကလတ်…..)
၃။ စိတ်ဖိစီးမူ များခြင်း
၄။ အစားအသောက် အချိန် မမှန်ခြင်း
၅။ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ဆေးလိပ်၊ အရက် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း
၆။ ငန်သော အစားစာများ (ငပိ၊ငါးခြောက်…..)
၇။ သစ်သီးယိုစုံ၊ ချိုချဉ်၊ ရေခဲမုန်. များ စားခြင်း
၀က်ခြံ ပေါက်သောသူများအနေနဲအသား စား တာထက် အသီးအရွက်များကိုအလေးပေးစားသင့်ပါတယ်။
တရက် ကို ထမင်းသုံး နှပ် မှန်မှန်စားပြီး အရည်ရွမ်းသော အသီး များများ စားပေးရပါမယ်။ အသင့်စား သစ်သီးဖျော်ရည် ဗူး များ ကို ရှောင်ပါ။
တပတ်လောက် မှန်မှန်စားပေးလိုက်ရင် ၀က်ခြံ တွေ သိသိသာသာ လျှော.ပါးလာမှာပါ။ ၀က်ခြံထွက်လာရင် လဲ မမှည်.ခင်လက်နဲ.လျှောက်ဆိတ်တာ တို. ညှစ်တာတို. မလုပ်ရပါဘူး။
၀က်ခြံ တခု ဆိုတာ အသားထဲမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ. အဖြူရောင် အမြစ် (gland) ကလေး ရှိပါတယ်။ ၀က်ခြံမမှည်.ခင်မှာ ထိုအမြစ် ကို လက်နဲ.ညှစ်ထုတ်ဖို. အင်မတန်မှ ခက်ခဲပြီး နာကျင်လှပါတယ်။ ပိုးသက်ထားတဲ. ဓါး အသေးလေးနဲ. ခွဲပြီး အမြစ် မထုတ် နိုင်ရုံမှတပါး မညှစ်သင်.ပါ။
အကယ်၍ လက်နဲ. ဆိတ်တာ ညှစ်တာလုပ်ရင် ၀က်ခြံ အမြစ် က ထဲ မှာ ပုပ် ပြီး ၀က်ခြံ အထက်မှ အေ၇ပြား တွေရောင် ပြီး တော်ရုံနဲ. မမှည်.တော.ပါဘူး။ နောက်ဆုံးပြည်တည်ပြီး မှည်.လာလို. ညှစ်ပြီးသွားရင် အချိုင်.အခွက်အနာရွက် ကျန်ခဲ.ပြီး အင်မတန်မှ အကျည်းတန်စေပါတယ်။
အမာရွက်ပျောက်ဆေးတွေရှိပေမယ်. မထိရောက် နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင်. ၀က်ခြံပေါက်တဲ. အချိန်မှာ အိမ်တွင်းဖြစ် ဆေးဝါးတွေနဲ.ကုသနိုင်တဲ. နည်းလမ်းတွေ ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ လိမ္မော်သီး အခွံ
လိမ္မော်သီး အခွံ ကို ရေ အနည်းငယ်ရော၍ ထောင်းပါ။ ထွက်လာသော အရည် ဖြင်. ၀က်ခြံ ပေါ်လိမ်းပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ ကိုထပ်ခြမ်းခွဲ ၍ ၀က်ခြံ ပေါ်ကို ခဏခဏပွတ်ပေးပါ။ ဒါ.အပြင် ကြက်သွန်ဖြူ ကို တရက် ၃ ဥလောက် ၁လလောက် မှန်မှန်စားကြည်.ပါ။
၃။ နံနံပင် ၊ နနွင်း
နံနံပင် ထောင်းလို.ရတဲ. အရည် လက်ဖက်ရည် တဇွန်းနဲ. နနွင်း အနည်းငယ်ရောပြီးတော.လဲ ၀က်ြံခံပေါ် လူးနိုင်ပါတယ်။
၀က်ခြံပေါက်သော မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ကျောကုန်း ပေါ် သခွားသီး စိတ် နဲ. ၁၅ မိနစ်လောက် ကြာအောင်နေ.စဉ် ပွတ်ပေးပါ။
ငွေကုန်သက်သာ လွယ်ကူတဲ့သဘာဝ နည်းလေးတွေနဲ့ လှနိုင် ကြပါစေ။